Musharrax Cali Xaaji: “Nin shandad sita oo maanta soodegay wallaahi buusan Puntland xukumi karin!” (daawo) – Radio Daljir
Musharrax Cali Xaaji: “Nin shandad sita oo maanta soodegay wallaahi buusan Puntland xukumi karin!” (daawo)
Diseenbar 9, 2018 2:28 g 0
Musharrax Madaxweyne Puntland Cali Xaaji Warsame oo degmadda Waaciye ee gobalka karkaar ka hadlayeey ayaa ku dheeraday musharrixinta tiradda badan ee isu soo taagay hogaanka Kursiga madaxtinamadda Puntland 2019.
Cali Xaaji ayaa si gaar ah uga hadlay Musharrixinta qurbajoogta ah ee taladda dalka siiba Puntland doonaya inay hogaamiyaan isago sheegay inaysan dan u waddin shacabka Puntland.
“Nin Hada ugu horeysa Puntland oo Sita shandad oo Puntland kale aqoon wallaahi ma xukumi karo wax walba intuu lugta ku walaaqo buu kadib ayadoo duluf ah nagu soo tuurayaa”ayuu yiri Musharrax Cali Xaaji warsame.
ku dhawaad 30 Musharrax ayaa isku soo sharaxay Madaxtinimadda Puntland 2019,iyaddo qaar baddan oo musharriixintas kamid ah ay yihiin qurbajoog.
Hoos kadaawo Khudbadda Musharrax Cali Xaaji warsame
Ololaha Doorashooyinka Puntland - Cali Xaaji 2019 41 Siyaasadda & Dhaqaalaha 406 Wararka 13395
Wacal Daray ah: Agaasimaha Guud ee Radio Daljir oo isku day dil ka badbaaday